hoyga: Villa Anundgård la jecel yahay view u gudubno, | Holmbygden.se
Posted on 28 April, 2014 by Holmbygden.se
Waxaan Anundgård waxaad ka heli doontaa gurigan 1½-story la views qurxoon ee Holmsjön. En gedigen Villa centralt i byn Anundgård.
Ku haboon, tusaale ahaan. qoys carruur leh, kuwaas oo ay helaan nolol ammaan ah ee baadiyaha kula waxyaabaha sida Terrace la views gudubno qurux badan u jeedday xagga koonfureed oo aad rabto si ay u awoodaan in la wado baabuur ku galay garaashka ee xilliga qaboobaha.
Eeg sawiro badan oo halkan ka akhriso.
Raadinta guri ku Holm oo ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqo Holm at Holmsjön u qurux badan?
Under hoyga aan isku dayno in la soo ururiyo oo dhan waafajin laga heli karo Holm. Mararka qaarkood waxaa dhici karta xitaa in ka badan, waxaynu og nahay, ama dhacaya. Sidaa darteed Report soo dhaweyneynaa xiisaha halkan.
Qoysaska raba barbaarinta ammaan ah ee baadiyaha
Fadlan nala soo xiriir la qabto wax su'aalo ah, sidaas darteed waxaan ka jawaabi kara su'aalaha ama tixraac qoysaska halkan ku nool, kuwaas oo kuu sheegi kara sida ay tahay in ilmaha ay ku koraan jawi nabdoon halkan Holm.
xayeysiis kale hoy halkan
Ku xayeysiiso aad beeralay halkan, free!
Afkaarta on u dhaqaaqo Holm?
Subscribe to shaqooyin cusub halkan.